एमाले पत्रकारलाई चाइनिज हेल्थ किट सित्तैमा – MySansar
एमाले पत्रकारलाई चाइनिज हेल्थ किट सित्तैमा
Posted on May 21, 2016 by Salokya
नेपालमा पत्रकार भनेको ‘पत्रकार’ मात्रै हुँदैनन्। कांग्रेस पत्रकार, एमाले पत्रकार, माओवादी पत्रकार आदि पार्टी पत्रकार पनि हुन्छन्। नेपाल प्रेस युनियन कांग्रेसी पत्रकारहरुको संगठन हो। पार्टी विधानले यसलाई शुभेच्छुक संस्था भनेको छ। माओवादी पत्रकारको संस्था चाहिँ क्रान्तिकारी पत्रकार संघ हो। त्यसैगरी एमाले पत्रकारहरुको संस्था प्रेस चौतारी हो। पार्टी विधानमा यसलाई विद्यार्थी, मजदूरहरुको जस्तै जनवर्गीय संगठनको दर्जा दिइएको छ।
यही एमाले पत्रकारहरुको संगठनको अहिले आठौँ महाधिवेशन चलिरहेको छ। देशभरका एमाले पत्रकारहरु अहिले राजधानीमा भेला भएका छन्। ती पत्रकारहरुले महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन र किताबका साथै चाइनिज र अंग्रेजी भाषामा लेखिएको एउटा रातो झोला पाए।
स्वास्थ्यखबरले दिएको जानकारी र राखेको फोटो अनुसार झोलामा त तै अङ्ग्रेजी भाषामा पनि केही लेखिएको छ तर त्यसभित्र भएका औषधिमा भने चाइनिज अक्षरमात्रै।
त्यो औषधि के हो ? के को लागि प्रयोग गर्ने ? नबुझेर हैरान।
स्वास्थ्यखबरका अनुसार भूकम्पपछि चीनले सहयोग स्वरुप पठाएको प्याकेज थियो यो। झोलाको बाहिरै प्रकोपपछि प्रयोग गर्ने भनेर अँग्रेजीमा प्रष्टै लेखिएकाले पत्रकारका लागि होइन, भूकम्प पीडितका लागि थियो भन्ने बुझिन्छ। भूकम्पको समयमा बाँड्नुपर्ने यो कुन संस्थाले त्यसै स्टोर गरेर राख्यो। कहाँबाट प्रेस चौतारीको नेतृत्वले भेटे। प्रतिनिधिलाई धेरैथोक दिएजस्तो हुन्छ भनेर बाँडिदिए।
5 thoughts on “एमाले पत्रकारलाई चाइनिज हेल्थ किट सित्तैमा”
भुकम्पपछि पीडित क्षेत्रका पत्रकारका लागि भनेर आएको होला, केही अघि चितवनमा पत्रकार महासंघको भेलामा पनि यही किड बाँडेका थिए, यता चौतारीमाप नि बाँडेछन, प्रेस काउन्सिलले पत्रकार महासंघका लागि मात्रै उपलब्ध गराएको झोला पनि चौतारी अधिवेशनमा वितरण गरेर सदुपयोग भयो भन्ने सुनियो ।
ठिकै छ नि पत्रकार बन्धु हरु मुक्का खाने काम गर्नु हुन्छ , आपतकालीन स्थितिको लागि काम आउछ |
यो त अस्ति पत्रकार महासंघको अधिबेसन चितवनमा हुँदा समेत बाडिइएको थियो !!!
वा एमाले वा! भुकम्पपीडितको सामाग्री, राष्ट्रबादी पार्टिको आलोचना गर्न त नमिल्ने हो मन मानेन।
थुक्क गरीब पत्रकारहरु! सित्तैमा पाए अलकत्रा खाएर मट्टीतेलले कुल्ला गर्नेहरु! फेरी यो गरिखाने खुबी नभएर पार्टीको पुच्छर समातेर हिंड्नेहरुको कति सम्म बुद्धि हुँदैन भने भुकम्प पिडितको सामान कहाँबाट आयो भनेर हल्ला गर्नुपर्ने ठाउँमा चुपचाप झोला बोकेर हिंडेछन् ए। रामशरणलाई भुकम्प पिडितको जस्तापाता खायो भनेर सबैभन्दा धेरै हल्ला गर्ने सम्भवत: यही समूह थियो होला। एमाले इतरका सबै दललाई भारतीय दलालको बिल्ला भिराउन कस्सिएर लागेको यो प्रोपोगान्डा समूह आफै चाइनाबाट आएको समान चिरिप्प पार्दै रहेछन। सबैको हातहातमा एक एक मुठी सुनको असर्फी राखिदिने हो भने त दुइटा ओठ नै सिलाउने थिए होलान। हुनत के को कराई भयो र एनजीओको शाखा न परे..